मलेसियाबाट घर पठाउने नाममा नेपाली माथी लुट्दै बिचौलिया ! कारवाही खोइ ? - ramechhapkhabar.com
मलेसियाबाट घर पठाउने नाममा नेपाली माथी लुट्दै बिचौलिया ! कारवाही खोइ ?
मलेसिया सरकारले दिएको आममाफी कार्यक्रम (रिक्यालिब्रेसन पुलाङ) कार्यक्रम अक्टोबर १६ देखि पुन: थप गरेको छ। सो कार्यक्रम मार्फत विभिन्न देशका कामदार जो मलेशिया अबैधानिक रुपमा बसिरहेका छन, त्यस्ताहरुका लागि पुन बैधानिक बन्ने वा स्वदेश फर्किन दिएको अवसर हो।
उक्त कार्यक्रम मार्फत बस्न नचाहे फाइन तिरेर फर्किन सक्ने छन। मलेशियामा अवैधानिक रही विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरु लाई लक्षित गरि बिगत एक बर्ष देखि यो कार्यक्रम संचालित छ।
कोभिड-१९ को कारण आफ्नो देश फर्किन नपाएका, भिसा सकिएका , अवैधानिक, भिसा नवीकरण गर्न नसकेर अवैध रुपमा मलेशियामा कामगरीरहेका आप्रवासी कामदारहरु रिक्यालिब्रेसन कार्यक्रम मार्फत हाल धमाधम फिर्ता भइरहेका छन।
यसरी स्वदेश फर्किनेहरुमा स्वदेश फर्किन लाई कागजी प्रक्रिया सम्बन्धि पर्याप्त ज्ञान नहुदा मलेशियामा रेस्टुरेन्ट, म्यानपावर कम्पनी र विभिन्न एजेन्सीहरु संचालन गरेर बस्ने नेपाली ब्यापारीहरुले मोटो रकम लिएर स्वदेश फर्किने चाजो पाचो मिलाई दिएका गुनासोहरु आउन थालेका छन।
यद्यपि मलेशियाको नेपाली श्रम वजारमा यो नौलो भने होइन। क्वालालम्पुर आसपासमा रहेका नेपालिहरुको हकमा त्यो अवस्था न आउन सक्छ। तर मलेशियाका विभिन्न कुना कन्दरामा काम गरिरहेका नेपालिहरु लाई यस्ता अवसर र तिनको प्रक्रिया बारे कमैलाइ मात्र जानकारी हुन्छ।
टिकट खरिद गरिदिने, दूतावासमा ट्राभल डकुमेन्ट बनाई दिने पिसीआर टेस्ट गरिदिने र बस्न समेत सुबिधा दिएर नेपालिहरु होटेलमा तानिन्छन।कोहि साथिहरुकै सम्पर्क मार्फत बिचौलिया कहाँ ठोक्किन पुग्छन। यहि मौकामा ब्यापारीहरुले मोटो रकम लिने गरेको स्वदेश फर्किन बिमानस्थल आएका नेपालिहरुले बताए।
नाम नखुलाउने सर्तमा एक नेपालिले भने आफ्नै नेपालिको पसल हो दुई पैसा भए पनि नेपालिकै होस भनेर आईन्छ। तर आवस्यकता भन्दा बढी पैसा लिदा हामी मारमा पर्यौ, शुरुमा एजेन्टले सबै काम गरिदिने भनेर पैसा लिन्छ।तर होइन रहे छ। फोन घुमाएकै भरमा ठग्दा रहेछन। सवै डकुमेन्ट बनाउन देखि अध्यागमन बिभाग आफै जानुपर्दो रहेछ।”उनले भने।”
मलेशियाको इपो पेराक क्षेत्रमा २८ महिना अघि फाम अईल कम्पनिमा आएका राजकुमार कम्पनी बाट भागेर घर जान बिचौलिया मार्फत बिमानस्थल आएका रहे छन। उनले घर फर्किन भनेर क्लाङको एक नेपाली रेस्टुरेन्टका साहु लाई मलेसियन रिङ्गिट-३७०० बुझाएको बताए।
रिक्यालिब्रेसन कार्यक्रम मार्फत घर जान भनेर आएका दाङका अर्का गोपाल ओलिले पनि नेपाली एजेन्टले आफू सङ मोटो रकम लिएको बताए। घर फर्किन भनेर उनले मलेसियन रिङ्गिट ३६०० सय बुझाएका रहे छन। २/४ सय काम गरि दिए बापत कमिसन खाए खासै फरक पर्दैन तर करिब ४ महिना दुख गरेर कमाएको पैसा नेपाली दाजु भाई नभनी खाई दिदा दुख लाग्यो।”उनले भने।
मलेशियन सरकारले संचालन गरेको रिक्यालिब्रेसन पुलाङ कार्यक्रम नेपाल पठाउने बहानामा बिचौलियाहरुले धेरै नेपालिहरु सङ मोटो रकम लिरहेका छन। मलेशियाको विभिन्न कुना कन्दरा बाट घर फर्किन आएका उनिहरु राजधानी क्वालालम्पुरका लागी नौलो हुन्छ्न। यहि मौकामा बिचौलियाहरुको दाउ पल्टिन्छ।
कागजी प्रक्रियाबारे जानकार नहुनु उनिहरुको कमजोरी हो। जस अन्तर्गत हवाई टिकट, पिसिआर टेस्ट, भ्यालिड पासपोर्ट वा ट्राभल डकुमेन्ट लिएर विमान स्थलको दोस्रो तल्लामा फिङरिङ गरेर स्वदेश फर्किन सकिने ब्यवस्था छ। सामन्यतया बिमानको टिकट दर बजार भाउमा भरपर्ने भएकोले घटबढ हुनसक्छ।
हालको अवस्थामा हेर्दा करिब १५५० मलेसियन रिङिट देखि १७०० सम्म कायम रहेको बुझिएको छ। भने यो मूल्य बजार अनुसार थपघट हुन सक्छ। त्यसैगरी पिसिआर टेस्टको मलेसियन रिङ्गिट १६५ देखि १९० सम्म लिन्छन। इनिग्रेसन फाइन-५०० र ट्राभल डकुमेन्टको आर.एम-१६० लाग्छ। यसरी हेर्दा करिब २४०० मलेसियन रिङ्गिट लाग्ने सोझै अनुमान लाउन सकिन्छ।